Aluminium Extrusion Profiles Maitiro
na admin pa 20-01-16
rocessing tekinoroji yealuminium nhoroondo yekuwedzera mafiridhi. Kugadziriswa kweakawedzera aluminium profiles. Aluminium profiles yakanyungudutswa uye yakawedzerwa kuti iwane zvikamu zvakasiyana zvealuminium.Iyo yekugadzira maitiro ealuminium profiles inonyanya kuve ne3 maitiro. ndeaya: Kukanda → Kutambanudza. ...
Kushandiswa kwealuminium pane muviri
Aluminiyamu chave chinhu chakanakisa kune vamwe vagadziri vemotokari. Motokari dzine aluminiyamu miviri inokwanisa kuvandudza hupfumi hwehuni, kukanganisa kupokana uye kubata. Vazhinji ma automaker kutenderera pasirese vanoona ramangwana realuminium miviri uye vanotenda kuti zvinhu izvi zvinokurudzira kusimudzira kwe ...
Ruzivo diki nezve aluminium
na admin on 20-01-07
luminum chokwadi inokupa iyo ruzivo rwechisikigo chinhu chinoshandiswa mune akawanda marudzi maindasitiri. Aluminiyamu inoonekwa sechinhu chinotonhorera. Iyo yazvino, yakapfava, yakasimba uye yakapfava. Iwe unogona kuwana aluminium inoshandiswa kugadzira inogona, bhodhoro uye zvimwe zvigadzirwa zvakawanda. Heano zvimwe zvinonakidza chokwadi pamusoro aluminium ...